Indlu yefama enembali ephangaleleyo
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguReto & Farhana
Wamkelekile kwindlu yethu yasefama esandula ukulungiswa ngenkulungwane ye-17 'La Bottière' ethe saa indawo yokuhlala eyi-200m² kunye nendalo entle macala onke, enamagumbi okulala ama-3, amagumbi okuhlambela ayi-2, igumbi lokutyela elinye lokuhlala, ithala leencwadi elinebhedi eyongezelelweyo, ikhitshi elikhulu kunye nefoya.
I-La Bottière - indlu yasefama ye-17th Century - igugu, kwaye iphumelele ibhaso lesizwe lokulungiswa, ngokugcina iimpawu zakudala kunye nokusebenzisa ubuchule bembali (umzekelo, i-lime mortar kunye nepeyinti). Indlu ekuqaleni yayiyeyeMonastery ye-11th Century ekufutshane yaseBelllay eyayidla ngokwenza itshizi edumileyo iTete de Moine, kwaye kamva yayiyeyeNkopho yeMennonite yemveli eyayiphila ubomi obulula ngaphandle kombane kunye nokuqhuba amanzi ashushu de sayithenga kwiminyaka engama-20 eyadlulayo. . Sazipha ixesha lokulungisa, nto leyo esasiyenza ubukhulu becala nanini na sasinexesha lokuphumla.
ILa Bottière yinxalenye yendlu entle, ethule kakhulu, enabamelwane aba-3 abalungileyo. Ikufuphi ngqo nommandla wolondolozo lwendalo, umzila webhayisekile wesizwe, ukukhwela amahashe okuninzi kunye namathuba okuvuna amaqunube namakhowa kunye nemilambo, amachibi namachibi amema ukuqubha kunye nezikhululo ezincinci zokutyibiliza ekhephini kunye neekhilomitha ezininzi ezilondolozwe kakuhle. iingoma zokutyibiliza kwilizwe lonke.
Iintaba zeJura, ummandla apho ilali yethu - iLa Bottière - ikhona, lithafa eliphantsi nje kwe-1000 leemitha ukuphakama kwaye libonelela ngezolimo zemveli ngamadlelo amakhulu eenkomo namahashe.
Ilali yethu yindawo ezolileyo ethe qelele, kude nohola wendlela kungekho sandi setrafikhi ngaphandle koko itrektara yokulima ngamaxesha athile, ukukhala kwamahashe kunye nezandi zokukhala kweentsimbi zenkomo.
Ukuhamba ngeenyawo, ukuhamba ngeentlanga, ukutyelela ibhayisekile, ukuhlola indalo etyebileyo, ukuqokelela amakhowa okanye amajikijolo, ukuya kuqubha okanye ukukhwela kulula macala onke. Indlu ibekwe kwindlwana encinci yezindlu ezine. Ubumelwane bubonelela ngezinto ezininzi ezinomtsalane kubakhenkethi. Izitali zamahashe ezidumileyo zeBelllay kunye ne11th Century Bellelay Monastery kunye nomboniso wayo wobugcisa bale mihla kunye neekonsathi zamalungu zikumgama weekhilomitha ezi-2, kunjalo namathuba okuthenga.
Umbuki zindwendwe ngu- Reto & Farhana
Indlu yasefama ilawulwa ngabamelwane bethu, abakwa-Scheideggers, usapho lwasefama oluhlala kufutshane, oluya kuba lundwendwe lwakho kwaye lubekho ukukunceda nanini na ufuna. AbaScheidegger bathetha iilwimi ezimbini zesiFrentshi kunye nesiJamani kwaye banesiNgesi esisisiseko. Ungaxoxa nabo ngeenkonzo ezongezelelweyo onokuthi uzifune/unqwenele, ezinjengokundwendwela iifama zabo nezilwanyana zabo, ukuyolanda nokulahla njl.njl. Bakwathengisa amaqanda nezinye iimveliso ngokuthe ngqo kwifama yabo.
Abantwana bakho bamkelekile ukuba batyelele ifama yakwaScheideggers eneenkomo, iikati, inja, imivundla, inkukhu namadada.
I-Scheideggers ikwabonelela ngamasimi equnube kunye ne-raspberry ukuze bazikhethele ngokwabo, ukusuka ngoJuni ukuya kuSeptemba.
Indlu yasefama ilawulwa ngabamelwane bethu, abakwa-Scheideggers, usapho lwasefama oluhlala kufutshane, oluya kuba lundwendwe lwakho kwaye lubekho ukukunceda nanini na ufuna. AbaSch…
UReto & Farhana yi-Superhost